Kumwe kuverengwa kusviba kweChishanu kweChishanu. Kuumbwa uye nhau | Zvazvino Zvinyorwa
Mangwana ndiyo ine mukurumbira Black Friday (paSaxon Nhema Chishanu, kuti kana ndikanyora chinyorwa ichi muChirungu, saka ndaizochishandisa). Uye kubvira rimwe zuva Ndakapindura kuverenga kashanu Kuti utore mukana wemuvara wandinoda kwazvo, heano mamwe mashanu mazita.
Veterans uye ma greats eiyo genre senge munhu wemunyika Lawrence Silva kana gaul Pierre Lemaitre miunganidzwa miviri yeakakurumbira akateedzana akaratidzirwa. Iyewo gaul Ian Manook zvinotidzosera kumashure Mongoriya. The american Connelly inotisvitsa kune isina moto Harry bosch. Y Lars Kubata, iyo yekuNorway yekutsikisa chiitiko chegore rapfuura, inodzoka neinovhero zvakare nemasikirwo kumashure uye zvimwe zvakavanzika.
1 Bevilacqua uye Chamorro Series - Lorenzo Silva
2 Verhoeven Series - Pierre Lemaitre
3 Nguva Dzemusango - Ian Manook
4 Rima Rutivi rweGonhere - Michael Connelly
5 Miti Gumi nenhanhatu yeSomme - Lars Mytting
Bevilacqua uye Chamorro Series - Lorenzo Silva
Iyo complete dzakateedzana yenhoroondo inozivikanwa kwazvo yekuSpain yematsotsi munguva pfupi yadarika. Silva aunganidza iyo 9 enganonyorwa achitarisa ivo vaviri vevarindi vehurumende vane vaverengi vakawanda vasina magariro, Bevilacqua uye Chamorro. Chipo chakanaka chinofanira kuitwa mangwana kana mumazuva mashoma anotevera. Inosanganisira mazita: Iyo nyika iri kure yemadziva, Asingashiviriri masayendisiti, mhute nemhandara, Hapana akakosha kupfuura mumwe, Mambokadzi asina girazi, Zano remvura, Mucherechedzo wemeridiyani, Mitumbi isinganzwisisike, Iko kuzvinyavada.
Munyori ane mukurumbira wechiFrench zvakare inounza pamwechete muvhoriyumu imwechete iyo yose nhevedzano ye quirky mutungamiriri Camille Verhoeven. Mumakumi mana emakore, ane mhanza uye akapfupika, anotevera mirawo yake pamwe nekuseka kwadhiabhorosi Uye asypical sezvaari ndizvo zviitiko zvaanofanira kugadzirisa. Misoro inosanganisirwa ndeiyi Irène, Alex, Rosy & John naCamille. Lemaitre akambotaurwa nezvese uye akanakisa semunyori werudzi rwevatema. Saka ino inguva yakanakira vateveri vako vakazvipira kuti vabate nyaya dzako huru.
Nguva dzesango - Ian Manook
Ian Manook ndiro zita rekunyepedzera raPatrick Manoukian, akaberekerwa muFrance. Zviri mutori wenhau, mupepeti uye munyori. Mumakore makumi masere akasika manook, musangano wekutaurirana wakasarudzika mune vanyori vekufamba.
Yakapihwa pamwe Yeruldelgger. Vakafa mugwenga, iyo yakahwina iyo SNCF du Polar Award 2014 uye zvimwe zvakawanda. Uye mariri Manook akapa iyo Mongolian Commissioner Yeruldelgger, sezvisina kujairika sekufadza. Zvino na Nguva dzesango uyo akahwina mubairo weLe Livre de Poche Readers 'mu2016, anodzoka naye ku Mongoriya. Nyika ino kupi tsika dzekare uye zvekunamata kugarisana nemafia uye mhosva dzakarongeka, zvinodzoka kuzove semutambi mukuru saYeruldelgger. Iwo akateedzana akakwanisa kukwezva vaverengi vazhinji kuburikidza neichi chiitiko chinoshamisira umo nyaya dzakanaka kwazvo dzinoitwazve uye vatambi vanogara pamwe chete nesimba guru.
En Nguva dzesango, ikozvino iri pakati pemahombekombe echando eMongolia, Inspector Oyun, Mubatsiri Commissioner Yeruldelgger, anosangana nechimwe chiitiko chakaoma kududzira: mutasvi webhiza rakarara kwazvo pasi pemusana weyakak inoita kunge yadonha kubva kudenga. Mukuru wake anowana kushamisika kwakafanana kana ari kune imwe nzvimbo, mupata, iyo chitunha chemurume kuti zvaigona kungogumira ipapo nekumhanyira pasi kubva kumusoro. Izvo zviitiko zvisina kujairika zvinopfuurira apo Yeruldelgger pachake anosungwa semunhu anofungidzirwa kuuraya Colette, shamwari yechihure yaakange amubatsira kuvaka zvakare hupenyu hwake.
Rima divi rekuonekana - Michael Connelly
Iye aisapisa moto aimbove mupurisa uye iye zvino wekupedzisira California wekupedzisira muongorori, Harry bosch, anodzoka kubva kuna baba vake Michael Connelly kutitaurira isu umpteenth ushingi. Imwe yekirasi yemhando iyo isingatombokundikana, Bosch anounganidza imwe nzira huru yevaverengi vanomuremekedza.
Mumusoro uyu mukuru weSouth California mogul anoda masevhisi aBosch nekuti ave kusvika kumagumo ehupenyu hwake uye anotambudzwa nekudemba. Muhudiki hwake aive nehukama nemukadzi mudiki weMexico, rudo rwake rukuru. Akaita nhumbu asi akashaya uye bilionea anoshamisika kuti akambove nemwana uye chii chingaitika kwaari. Saka anoshuvira kuziva kana aine mugari wenhaka, anotora Bosch.
Uye Harry, achifunga nezvehupfumi hwakawanda huri panjodzi, anoziva izvozvo chinangwa chako chingave chine njodzi kwete kwaari chete, asiwo kune munhu waari kutsvaga. Asi iwe haugone kusiya kana watanga dhonza tambo uye tsvaga zvinongedzo nezvake zvakapfuura.
Miti gumi nematanhatu yeSomme - Lars Mytting
Gore rapera munyori weNorway uyu yakanyora machati ese ekutengesa mumusika wekutsikisa ne Ebhuku rehunia. Uye zvino aronga kudzokorora kubudirira kwake neruzivo urwu rwusingasiye masikirwo echisikigo asi rwunounza zvinhu zvezvakavanzika uye zvekufambisa zvinyorwa. Wakatokwidziridzwa kumusoro weZita reNordic mazita akaita saKarl Ove Knausgard, chikumbiro chitsva chaMytting chinotaurira izvi
Handei ku 1971 uko vaviri vanourawa nekutsika girinedhi rekare mumunda wekare we hondo yesmeme, nzvimbo yeimwe yezvikamu zvinotyisa zveHondo Yenyika Yekutanga. Mwana wako ane makore matatu ekuberekwa inowanikwa mazuva mana gare gare mamaira mazhinji kure.
Izvi, zvinodaidzwa Edward, achamutswa nasekuru vake Sverre papurazi reNorway achiregeredza zvakapfuura. Asi rimwe zuva mumwe munhu anounza bhokisi rakagadzirirwa sekuru vake. Icho chidimbu chakaisvonaka chekuveza chakavezwa kubva kune birch huni. Edvard anofunga kuti ibasa rehama yaSverre, uyo aive akarasika kwenguva refu, uye tsvaga kutsvaga chinhu chemubatanidzwa pakati peichi chakavanzika chitsva nerufu runorwadza rwevabereki vake.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Zvazvino Zvinyorwa » Type » Nhema nhema » Imwezve mitema kuverenga kuChishanu Chishanu. Kuumbwa uye nhau